Sucuudiga oo wadankiisa ka joojiyey dadka ka imaanaya 11 wadan oo waaweyn.
May 29, 2021 Xuseen 1
Puntlandtimes (Riyaad)-Wasaaradda rrimaha Gudaha ee dalka Sacuudiga ayaa shaacisay in laga bilaabi berrito Subax oo Axad ah in loo fasaxay Dhoofayaasha 11 dal inay soo geli karaan Sacuudiga.
Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Riyaad ayaa waxaa si rasmi ah loogu sheegay in Dhoofayaashaasi laga baari doono COVID-19 isla marka ay ka soo degaan garoomada kala duwan ee Diyaaradaha ee Sacuudiga.
Dhoofayaasha loo oggolaaday inay booqan karaan Sacuudiga ayaa ah kuwa ka kala imaanayo dalalka Maraykanka, UK, Talyaaniga, Jarmalka, Sweden, Switzerland, Ireland, Portuqiiska, imaaraadka Carabta, Faransiiska iyo Japan.
Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa horey u joojisay inay dalkeeda soo galaan dadka imaanaya dalalkaas, sababo la xiriiray faafida Cudurka halista ah ee COVID-19 oo aduunka oo dhan saameyn ballaaran ku yeeshay.
Asc iska saxa cinwaanka warka ismalaha lama joojinine waa la fasaxay